Ziyathembisa izingxoxo ngesibhakela
ISABC isayine isivumelwa nophromotha besibhakela ngesikhathi izinhlaka ezihlukene zesibhakela zimashele le nhlangano zikhala ngokuthi imidllalo ayisakazwa Isithombe: SITHUNYELWE
IBOXING South Africa (BSA) izobuye ihlangane neSouth African Broadcasting Corporation (SABC) ngenhloso yokubhunga ngokusakazwa kwemidlalo yezamankomane kwithelevishini.
UCindy Nkomo oyisikhulu esiphezulu esibambile kwiBSA uthe nakuba engakabi nosuku oluqondile kodwa bazoba nomhlangano noGary Rathbone oyimenenja jikelele yomnyango wezemidlalo kwaSABC, ingakapheli inyanga noma ngasekuqaleni kwezayo.
Lesi sikhulu sithi kuzoba wumhlangano wesibili phakathi kwabo nabeSABC.
UNkomo uthe unethemba lokuthi zikhona izindaba ezinhle abazovumelana ngazo.
“Sixoxile noRathbone osekusele ukuvumelana ngosuku. Nginethemba lokuthi kuwo sizophuma nezindaba ezinhle,” kusho uNkomo.
Ebuzwa ngemihlangano esibanjwe yilezi zinhlangani kodwa kugcine kungenzeki lutho, uNkomo uthe: “ISABC ayikaze inqabe ukubuyisa isibhakela kwithelevishini. umabonakude. Into engicabanga ukuthi ibambezela ukusakazwa kwesibhakela yizinkinga zenkece ezihlasele, nokuhlale kushintsha ubuholi bayo. Sithi sesiqede konke nobuholi obusuke bukhona bese buyashintshwa. Lokhu kuyasiphoqa ukuthi siqale phansi izingxoxo,” kusho uNkomo.
Emasontweni edlule izinhlaka ezahlukene zesibhakela bezimashele ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park, eGoli zikhalaza ngokungasakazwa kwalo mdlalo.
Bebekhala ngokuthi le nhlangano incamele ukusakaza ibhola lamaligi amazwe aphesheya, ilaxaze isibhakela sakuleli. Incwadi yezikhalazo yamukelwa uRathbone.
ULebo Mahoko ongupromotha waseFree State, obehola le mashi uthe iSABC bayitshele ukuthi uma kuphela uJanuwari ingayibuyisi le midlalo kwithelevishini bazobuya ngamandla, bengasancengi.
“Siyabonga ukuhlonishwa iSABC ngesikhathi simasha. Yazamukela izikhalazo zethu, yazibeka nezizathu zayo. Siyinike umnqamulajuqu wokuphela kukaJanuwari. Sidinga isibhakela sibuyele kwithelevishini. Abantu abaningi kabanayo imali yeDStv, iSABC yisiteshi somphakathi. Lesi simo esikuso sixosha abaxhasi nokuthuthuka kwalo mdlalo,” kusho uMahoko.
Ngenkathi kubikwa ngale mashi, iBSA yathi kayizihlanganisi nayo, inezingxoxo eziqhubekayo neSABC.
Yathi bazofaka igama lezamankomane ehlazweni futhi bazowukhomba umuzi onotshwala.
UNkomo uthe kazikho izinyathelo ezizothathelwa abebeyingxenye yale mashi ngoba beyinokuthula.